Na-ewu ewu Mac OS, windo ma ọ bụ Linux, VLC Player bụ nnọọ demandable na freeware media ngwa. Ndị mmadụ na-achọ ụzọ ibudata na tinye sobtaitel faịlụ na VLC on internet ọtụtụ ugboro. Ya mere, ebe, isiokwu a na-agba na-enyere gị aka ime otú maka nbudata a sobtaitel faịlụ maka gị họrọ media faịlụ na-agbakwunye sobtaitel na VLC.
Olee otú Download ndepụta okwu Iji VLC
VLC Player na-ike na sobtaitel atụmatụ, na ọ nwere ike ekwe ka ị download faịlụ-akpaghị aka. Ma ihe niile ị chọrọ ibudata ndọtị maka VLC maka achọ na nbudata na sobtaitel ọbụna na-akpaghị aka maka ugbu a na-akpọ mgbasa ozi faịlụ. VLSub bụ ihe magburu onwe ndọtị na pụrụ inyere gị aka si ime nke a ọrụ. Ebe a na nzọụkwụ na-atụle ibudata ndepụta okwu iji VLC.
Nzọụkwụ 1: nbudata VLSub ndọtị
Ị mkpa ibudata VLSub ndọtị n'ihi na gị VLC. Ọ nwere ike na-abụ maka nbudata na ya Github webpage. A abịakọrọ faịlụ ga na-agbalị ike ibudata. Ugbu a wepụ ebudatara abịakọrọ faịlụ gị họọrọ ebe. Na i nwere ike ịhụ a faịlụ n'ihi na ndọtị "vlsub.lau" ke amịpụtara nchekwa.
Nzọụkwụ 2: N'ịga "vlsub.lau" ka ndọtị nchekwa nke VLC
Ọ na-chere na VLC arụnyere na gị PC, ma ọ bụ na ị chọrọ iji wụnye ya si VLC website. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ime ma ọ bụ detuo "vlsub.lau" ndọtị nchekwa nke VLC. Olee otú i nwere ike inwe na ndọtị nchekwa dị iche iche OS, ọ na-atụle n'isiokwu na-n'okpuru usoro.
a. N'ihi na Windows os:
1. Detuo "vlsub.lau" na mado ya ka VLC ndọtị nchekwa.
2. Destination nchekwa: Drive C (usoro mbanye)> Mmemme faịlụ> VideoLAN> VLC> lua.
b. N'ihi na Linux os:
Mepụta a "lua" nchekwa na "~ / .local / òkè / VLC" na "extensions" nchekwa na "~ / .local / òkè / VLC / lua". Ndị nchekwa na-mkpa ike n'ihi na ha anaghị adị ndabara. Ugbu a ị chọrọ ikpụgha "vlsub.lau" na mado na ọnọdụ "~ / .local / òkè / VLC / lua / extensions /".
c. N'ihi na Mac OS X:
Detuo "vlsub.lau" na mado ya ka VLC ndọtị nchekwa dị ka njikọ n'okpuru.
Nzọụkwụ 3: Open VLC iji nweta "VLSub"
Ugbu a ẹkedori VLC ọkpụkpọ na-emeghe media faịlụ na ị chọrọ igwu. Wee pịa "Ngwaọrụ" iji na-enweta "VLSub" nhọrọ n'okpuru a menu.
Nzọụkwụ 4: VLSub Ohere-Chọọ Ndepụta Okwu
Gị mkpa iji tinye ihe nkiri aha ke VLSub window, na ọ ga-enye gị ịgbanwe asụsụ nke sobtaitel kwa. Ị nwere ike ịlele niile yiri sobtaitel faịlụ site na OpenSubtitles.org site na ịpị igbe maka "Chọọ site aha" ma ị nwere ike pịa "Chọọ site hash" gbakọọ hash nke na-egwuri video ma na-niile ndepụta okwu nke ga-dakọtara hash. Ma a gbanwetụrụ video ga-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na unu site "Chọọ site hash".
Mgbe na-adịkwa results, họrọ họọrọ sobtaitel. Wee pịa na sobtaitel na pịa na "Download nhọrọ". Ugbu a, ọ ga-ekwe ka ị na-azọpụta ebudatara sobtaitel ka a họọrọ ebe ma ọ bụ ndabara otu. Mgbe nbudata sobtaitel, VLC nwere ike Ibu Ibu ebudatara sobtaitel.
Olee otú Tinye ndepụta okwu Iji VLC
Iji tinye a sobtaitel, ị ga-enwe otu adịkwa sobtaitel n'ihi na gị video ma nbudata-akpaghị aka na VLC ma ọ bụ na ibudata ya si website. Nzọụkwụ ịgbakwunye a sobtaitel iji VLC bụ dị ka n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: nbudata a Ndepụta Okwu
Download a sobtaitel si internet (subscene, OpenSubtitles, moviesubtitles, wdg) ma ọ bụ soro n'elu ntụziaka ibudata a họọrọ sobtaitel n'ihi na gị video-akpaghị aka. The sobtaitel faịlụ bụ n'ozuzu na-abịa na (.srt) faịlụ ndọtị.
Nzọụkwụ 2: Bugharịa Ndepụta Okwu ndị Video nchekwa
I nwere ike inwe a abịakọrọ faịlụ mgbe nbudata a sobtaitel si internet ma wepụ ya ka video nchekwa. Ma mgbe ị nwere ike nweta faịlụ na (.srt) ndọtị faịlụ, dị nnọọ idetuo sobtaitel faịlụ na mado ya ka video nchekwa.
Nzọụkwụ 3: nyegharịa Ndepụta Okwu File
Ugbu a nyegharịa sobtaitel faịlụ dị ka video faịlụ. Ị nwere ike nweta abụọ faịlụ dị ka "samplemovievideo.avi" na "samplemovievideo.srt".
Ị nwere ike-egwu media faịlụ ugbu a na-eji gị VLC Player. Ị nwere ike sobtaitel ahụ i guzobere maka video. Ọ bụrụ na e nwere nsogbu ọ bụla na sobtaitel, biko ego faịlụ aha na ego faịlụ na ị ebudatara.
Soro ntuziaka na-enwe sobtaitel na gị video na-egwuri egwu VLC ọkpụkpọ.
> Resource> VLC> Olee otú Download na Tinye ndepụta okwu Iji VLC